Naina RAKOTOMALALA | TAMIFA Madagascar
Olona tsy zoviana amin’ ny TAMIFA Madagascar raha i Naina RAKOTOMALALA satria isan’ ireo Mpikambana mpanorina ny Fikambanana efa hatramin’ ny taona 1995 izy.Miandraikitra ny fandrindrana foibe rahateo izy ankehitriny ka saika mifanerasera aminy avokoa ny ankamaroan’ ireo tanora mpikatroka.
Fa ankoatra izany, dia mpampiofana Mpitarika sy mampianatra ny tontolon’ ny fampivoaran-tena ny lehilahy.Sehatra izay tsy mifanalavitra amin’ ny voizin’ ny TAMIFA Madagascar.
Amin’ireo karazan-dahatsoratra sy fanehoan-tsamihafa izay iarahana amin’ ny TAMIFA Communication dia isan’ireo izay mitondra anjara biriky matevina ny tenany raha tsy hilaza afa-tsy ny “Rubrique HADIHADY” ao amin’ ny Bulletin RANITRA saika isaky ny mivoaka.
Eto amin’ity pejy ity dia indro atolotra antsika ny ampahany sasany amin’ izy ireny:
– Ny tena Leadership: Ireo hevi-diso amin’ ny fandraisan’ ny olona azy
– Ny Subconscient sy ny tsiambaratelony
– Ny tosiky ny sarika
– Maninona ny vahiny no mpanefoefo be eto Madagasikara?
– Ny fizarana mitsitsy
– Dory ny sambo
– Ny Mpitarika sy ny fanatreham-pivoarana
– Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana (Version PDF)
Manana tranonkala manokana koa i Naina RAKOTOMALALA izay izaràny zava- mahasoa maimaim-poana ho an’izay mila izany ary koa hitondràny ireo tolotra samihafa manodidina ny asany.
(Tsindrio eto raha hitsidika izany)
Eto amin’ito tranonkala ito kosa dia azontsika atao ny mifandray manokana aminy.Na amin’ ny maha-Mpandrindra foiben’ ny Fikambanana izany na amin’ ny maha-Mpampiofana Fifeheza-mitarika sy fampivoaran-tena azy.
Mameno ny takelaka eto ambany fotsiny isika dia voampita any aminy avy hatrany izany ary antenaina koa fa hanisy setriny ho antsika izay manoratra izy.